जट्टल्याण्ड प्रायद्वीप | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | डेनमार्क, के हेर्ने
La जटलैंड प्रायद्वीप यो जमिनको एक सुन्दर साझा थूक हो दुई देशका लागि। एउटा अंश जर्मन हो र अर्को भाग डेनिस। योसँग धेरै राम्रा परिदृश्यहरू छन् त्यसैले यसले घर बाहिर जान चाहने धेरै आगन्तुकहरूलाई प्राप्त गर्दछ।
प्रायद्वीप को मुख्य भूमि मा छ डेनमार्क र उत्तर को अल्बानिया र यसलाई सिम्ब्रिका वा सिम्ब्रिया प्रायद्वीपको नामले पनि चिनिन्छ, यो नाम सिम्ब्रोस र जुटोस जातिका मानिसहरूबाट लिइएको हो जुन यस क्षेत्रमा बस्नुहुन्थ्यो। यससँग राम्रा परिदृश्यहरू छन्, धेरै प्रकृति र निस्सन्देह, धेरै शान्ति छ। के तिमी उनीसँग भेट्न चाहन्छौ?
1 जट्टल्याण्ड प्रायद्वीप
2 जटलैंड टुरिज्म
स्वामित्व खुला, मैदानी र peatland परिदृश्य, त्यहाँ केही उचाइहरू छन् त्यसैले यो बरु फ्ल्याट हो नरम लहरहरु। प्रायद्वीप वरपर छ २30० हजार वर्ग किलोमीटर यद्यपि डेनमार्कको कुल आकारको सम्बन्धमा यो महत्त्वपूर्ण छ (यसले देशको दुई तिहाई प्रतिनिधित्व गर्दछ), यो धेरै बसोबास गरेको छैन र यसमा केवल साढे दुई लाख बहादुर मानिसहरू बस्छन्।
तटीय प्रोफाइल संग सजाइएको छ हिमनदी fjords र केहि टिब्बा। स्वाभाविक रूपमा, जाडोमा यो धेरै चिसो छ, ० डिग्रीको वरपर, जबकि गर्मी एकदम आर्द्र र तापमानको साथमा २० डिग्री सेन्टिग्रेड पनि नछोड्दछ। यो उत्तरी समुद्री किनारमा, बाल्टिक, कट्टेगट र स्कागर्याक, र पूर्व र दक्षिणमा जर्मनी हो।
प्रायद्वीपको उत्तरी भाग मुख्य भूमिबाट एक साँघुरो च्यानलले छुट्याउँछ जसले प्रायद्वीपलाई तटबाट तटमा काट्छ। यो केवल एक ब्र्याकेट पानी इनलेट हुन्थ्यो, तर १ 1825२XNUMX मा कृत्रिम उत्तर समुद्री बाढीको साथ, जडान भयो। तिर देखि तिर सम्म।
डेनिशपट्टि त्यहाँ दशवटा शहरहरू छन् र प्राय सबै प्रायद्वीपको महानगर र अधिक जनसंख्या क्षेत्र बनाउँछ। जर्मन भागको दुई भागहरू छन् र यसको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू फ्लेनबर्ग र कील हुन्।
सत्य यो हो कि पहिलो एlos्ग्लोस युरोपको यस भागबाट बसाईयो जुन अन्ततः इ England्ल्यान्डमा परिणत भयो, त्यसैले यो नाम। आज तिनीहरू बोल्छन्aस्थानीय बोली जुन आधिकारिक डेनिस भन्दा केहि फरक छ। यद्यपि यो समयसँगै घट्दै गइरहेको छ, यसले सांस्कृतिक कारणका लागि आफूलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्दछ।
जटलैंडले इतिहास, संस्कृति र प्रकृति प्रदान गर्दछ। उही हो र उत्तर जटल्याण्ड के ले हामीलाई भर्खरको प्रस्ताव गर्दछ। उत्तर व्यावहारिक रूपमा एक छुट्टै भूमि हो जुन हामीले माथिको कुरा गर्यौं। समुद्रले उनलाई जताततै घेर्दछ त्यसैले एक तरीकाले यो पृथक गरिएको छ र गर्मीमा धेरै घण्टा घामको आनन्द लिइन्छ।
यहाँ उत्तर जहाँ छ धेरै पर्यटक शहरहरू केन्द्रित छन्, केहि विशिष्ट मछुवाहरू, वा आधुनिक शहरको पनि अलबोर्ग। यो शहर शहरी बासिन्दाहरूको संख्यामा चौथो हो र हो कोपेनहेगन बाट 412१२ किलोमिटर। यो समुद्रमा बाहिर देखिन्छ र धेरै कम हिमाल र गाउँले घेरिएको छ। सहर बाट हो मध्यकालीन उत्पत्ति र होटल, संग्रहालय र रेस्टुरेन्ट केन्द्रित गर्दछ। यो बस्नको लागि राम्रो स्थान हो।
त्यहाँ नजिकै केहि कृत्रिम तालहरू छन्, यसमा धेरै छन पार्क र हरियो ठाउँहरू, थीम पार्क, वाइकिंग कब्रिस्तानहरु, ऐतिहासिक भवनहरू जस्तै १th औं शताब्दीको टाउन हल वा धनी व्यापारीहरूको बिभिन्न घरहरू र यहाँसम्म कि ए महल राजा क्रिस्टन III द्वारा निर्मित। उहाँ पनि जान्नुहुन्थ्यो कि कलात्मक आन्दोलनको मुटु कसरी बन्छ भनेर जानिन्छ स्केन को चित्रकारहरु, एक शताब्दी पहिले।
यहाँ उत्तर जटल्याण्ड पनि डेनमार्कको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पार्क हो, तपाईंको राष्ट्रीय पार्क २०० भन्दा बढी वर्ग किलोमीटर र सुन्दर परिदृश्यको साथ घासको मैदान, समुद्र र टिब्बा। र ती मध्ये धेरै तपाईं देख्नुहुनेछ WWII बाट डेटि bun। ल्यान्डस्केप अन्वेषण गर्ने राम्रो तरिका भनेको बाइक भाँडामा लिनु हो किनभने त्यहाँ धेरै छन् साइकल यात्रा मार्गहरू वा पैदल यात्रा। यसले बाट भ्रमण पनि प्रदान गर्दछ माछा मार्दै, सर्फिंग वा कायाकि।।
El दक्षिण जटल्याण्डअर्कोतर्फ, यो डेनिस सीमाना हो त्यसैले यहाँ छ इतिहास र सांस्कृतिक मिश्रण को धेरै। फ्लेन्सबर्ग Fjord जर्मनी संग प्राकृतिक सीमा हो तर त्यहाँ समुद्र तट र परिदृश्य यति खुला छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई आक्रमण गर्न देखिन्छन्।
El वाडेन सागर यो एक राष्ट्रीय पार्क हो, रमाइलो गर्नेहरूको लागि प्राकृतिक खजाना चराहरू र जंगली जनावरहरूको अवलोकन गर्दै। यो एक विश्व विरासत साइट हो। यहाँ पनि, दक्षिण मा, त्यहाँ महलहरू, मध्यकालीन शहरहरू र पुराना चर्चहरू छन् धेरै राम्रो अवस्थामा। को महल कोलडिhus्गस होआज भग्नावशेषमा। टोंडरमा पुरानो पानी टावर पनि छ, आज पनि एउटा संग्रहालयमा परिणत भयो।
र दक्षिण जुटलैंडले जर्मनी सीमाना गरेको हुनाले, तपाईले दुई देशहरू बीचको दोस्रो सम्बन्धको बारेमा र त्यसभन्दा अघि १ XNUMX औं शताब्दीमा यी दुई देशहरू बीचको युद्धको बारेमा धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि छ फ्र्टोसलेभरेन्स स Muse्ग्रहालय।
मध्यकालीन विगतमा केन्द्रित छ सन्डरबर्ग महल संग्रहालय र मा नाइट्स टूर्नामेंट यहाँ हरेक वर्ष आयोजित। यो एक सामान्य मध्ययुगीन जुत्ता हो जुन नाइट्स, घोडा र भालाहरूसँग छ। र यदि तपाईंलाई वाइकिsहरू मन पर्यो कि अब तिनीहरू यति फैशनेबल छन् कि तपाईं जटल्यान्डको दक्षिणी भागमा जान सक्नुहुन्छ Danevirke को वाइकिंग दुर्ग।
के तपाइँ गर्मी मा जान र चाहानुहुन्छ समुद्री तटहरूको आनन्द लिनुहोस्? ठिक छ, त्यहाँ शान्त समुद्री तटहरू छन्, उदाहरणका लागि यसमा केग्नेस प्रायद्वीप, Als मा, एक टापु वा सानो बेल्टको तटमा। साथै वाडेन सागर वा रोमो टापुमा यसको विशाल समुद्रतटहरू सहित।
जटल्याण्डको वरिपरि कसरी पुग्ने? उत्तर एकदम सजिलो छ किनकि यो धेरै कम्प्याक्ट छ र छोटो समयमा तपाईं धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ या त कार, ​​रेल वा बस। यो साइकलको लागि महान हो किनकि यसमा एक राम्रो चिह्नित नेटवर्क छ बाइक मार्गहरू र यो कुनै असम्भव उचाई छ। यदि तपाई तटमा सानो टापु जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले सँधै यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पानी जहाज। बसहरूको लागि, तिनीहरू शहर बाट शहरमा संचालन गर्छन् र उनीहरू भित्र पनि।
ठूला शहरहरूमा प्रत्येक २० मिनेटमा बस चल्दछ र त्यहाँ रातको बसहरू हुन्छन्, तर सानो गन्तव्यमा तिनीहरू केवल गर्मीमा चल्दछन्। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो वेबसाइट लेख्नुहोस् www.rejseplanen.dk अधिक जानकारी को लागी। ट्रेन सहज र छिटो छ र तपाईं उही टिकट टिकट अफिसमा वा स्वचालित मेशिनमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा सिट यात्राको अर्को मूल्य छ, हो, यद्यपि यो शिखर समयमा सिफारिस गरिन्छ। एउटा विकल्प भनेको टिकट प्रयोग गर्नु हो रिसेकोर्ट, जसले तपाईंलाई ट्रेन, बस र मेट्रोबाट यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ र सम्पूर्ण डेनमार्कमा सेवा गर्दछ।
अन्तमा, केहि उपयोगी व्यावहारिक जानकारी: डेनमार्क ट्रेन कम्पनी धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। कोपेनहेजबाट आरुसको लागि यात्रामा तीन घण्टा लाग्छ र एलबर्गमा करिब चार घण्टा लाग्छ। पनि उपयोगी छ युरियल पास।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » डेनमार्क » जट्टल्याण्ड प्रायद्वीप
बास्क देशमा के हेर्ने